Mpitarika ny manodidina: Zavatra 10 mety tsy ho fantatrao momba ny Downtown LA
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Mpitarika ny manodidina: Zavatra 10 mety tsy ho fantatrao momba ny Downtown LA
Novambra 10, 2021
Tao anatin'ny roa taona farany, niova tanteraka ny fomba fijerin'ny Downtown Los Angeles.
Miaraka amin'ny fidiran'ny trano fandraisam-bahiny, trano fisakafoanana, trano fisotroana, ary fivarotana, Angelenos maro no mirohotra mitsidika ny sehatra manodidina ny DTLA, saingy ahoana no ahafantaranao hoe aiza no haleha? Nitety faritra izahay mba hahitana hoe inona no mendrika hojerena, ary ireto misy zavatra folo mety tsy ho fantatrao afovoan-tanàna LA.
Betsaka noho ny eritreretinao ny zavakanto ho an'ny daholobe.
Raha resaka zavakanto ho an'ny daholobe, Ny Downtown LA dia manana ampahany betsaka amin'ny tsangambato sy sarivongana izay mijoro ho fanilo ho an'ny mpandeha. Ny zavatra voalohany tsikaritrao rehefa miditra ao amin'ny Distrikan'ny Zavakanto ianao dia ny sanganasan-kanto ho an'ny daholobe – ary hita eny rehetra eny. Ny afovoan-tanàna dia harena ara-javakanto ho an'ny daholobe manomboka amin'ny sary an-drindrina lehibe eo amin'ny sisin'ny tranobe mankany amin'ny asa kely kokoa eo amin'ny sisim-baravarankely, dabilio ary varavarana.
Endri-javatra lehibe ao amin'ny DownTownLA
Misy tranombakoka iray manontolo (maimaim-poana) ho hita eo amin'ny lalantsara iray.
Antsoina hoe Grand Central Art Center izy io, ary eo amin'ny lalantsara eo anelanelan'ny Main and Spring Street sy ny 2nd sy 3rd Street no misy azy. Ny faritra ihany koa dia trano fonenan'ny Shepard Fairey sy Mark Dean Veca ary nomena anarana hoe "Alley-Oop" noho ny zavakanto.
Misy sary sokitra mirefy 140 metatra amin'ny solomaso iray.
Ny LA Mural no solomaso voaloko lehibe indrindra eran-tany. Lehibe tokoa izy io ka tazanao lavitra… ary hoso-doko eo amin'ny sisin'ny trano iray izy io, fa tsy sary an-drindrina amin'ny tany fotsiny! Mpanakanto Robert Vargas no namorona izany tamin'ny 2008.
Afaka mahazo tsindrin-tsakafo miaraka amin'ny kaopy kafe ianao ao amin'ny Urth Caffe.
Ny toerana tsirairay ao afovoan-tanàna dia misy vata fampirantiana feno mofomamy sy tsindrin-tsakafo am-polony azonao vidiana rehefa avy nisakafo. Donuts, croissant, tarts, cakes, cookies, brownies… raha azo hanina ianao dia misy azy amidy!
Pixar tia afovoan-tanàna LA!
Ilay horonan-tsarimihetsika mampihetsi-po "Up" dia napetraka tao amin'ny tanàna an-tsaina izay misy fitoviana maro amin'ny afovoan-tanànan'i LA, anisan'izany ny sary an-drindrina lehibe any ivelany amin'ny rindrina fanorenana, trano Victoriana novana ho trano fonenana, fiarandalamby mitondra olona manerana ny tanàna… eny fa na dia trano misy tafo misy tafo mena aza! Ilay sarimihetsika dia notarihin'i Pete Docter teratany LA, mipetraka ao amin'ny Angelino Heights manan-tantara ao anatin'ireo trano manan-tantara maro novidiny ho an'ny fianakaviany taorian'ny nanaovany ny "Monsters Inc.
Ny Downtown LA dia fonenan'ny tacos trondro.
Tamin'ny tapaky ny taona 1970, mpandraharaha Ralph Rubio dia nampiditra ny taco trondro malaza amin'izao fotoana izao amin'ny fomba Baja any amin'ny faritr'i San Diego, ary saika avy hatrany dia nanomboka nanao tsipika manodidina ilay sakana ny trano fisakafoananany. Tamin'ny 1989, nanokatra trano fisakafoanana tao Anaheim izy, ary tamin'ny 1995, dia tonga tany Los Angeles izy. Rehefa nisokatra teo amin'ny arabe faha-9 sy Hill tamin'ny taona 1996 ny toerana voalohany ao afovoan-tanànan'i Rubio any Los Angeles, dia nanjary nalaza izy io — ary vato fisarihana ara-kolontsaina.
Bonus: Downtown LA no distrika fandraharahana be mpampiasa indrindra any andrefan'i Etazonia, ary ny afovoan-tanànan'i LA dia manana efitrano fandraisam-bahiny ambony indrindra any Southern California. Ny foibe manan-tantara ao Downtown LA dia fonenan'ny efitrano fandraisam-bahiny bebe kokoa noho ny isan'ny efitrano ao amin'ny San Diego's Hotel Circle, San Francisco's Union Square, na Seattle's Pike Place Market area.
Downtown LA no fonenan'ny burger In-N-Out tany am-boalohany. Tamin'ny 1948, Harry sy Esther Snyder dia nanompo ny mpanjifany voalohany avy amin'ny kaontera kely misy seza 10 ao amin'ny trano famokarana Lily Tulip navela teo amin'ny zoron'ny Westlawn sy La Brea Avenues.
Little Tokyo dia tsy anisan'ny afovoan-tanàna LA - Na dia tsy lavitra ny Station Union sy ny Distrika ara-bola aza no misy azy, dia ny Little Tokyo no manodidina azy. Izy io dia ao anatin'ny Little Tokyo Services Center, Inc., fikambanana tsy mitady tombony. Ny foibe ara-kolontsaina ankehitriny fantatra amin'ny anarana hoe Little Tokyo dia naorina tamin'ny 1887 tany am-boalohany ho toy ny toeram-ponenana ho an'ny olom-pirenena Japoney nifindra monina avy any Japana ary nonina tany Japantown niroborobo. Tamin'ny 1909, nantsoina hoe Los Angeles Atsinanana ilay vondrom-piarahamonina, ary tamin'ny 1931 dia nanjary fantatra amin'ny anarana hoe Little Tokyo. Tamin'ny 1942, taorian'ny nampidirana ny Amerikana Japoney, dia novana anarana indray ny vondrom-piarahamonina mba ho fantatra amin'ny anarana hoe Boyle Heights.
Ny Disney Concert Hall no tranon'ny LA Philharmonic - iray amin'ireo orkesitra malaza indrindra eran'izao tontolo izao, izay midika fa raha te hahita mpitendry mozika A-List ianao mamakivaky ny tanàna, dia ity no iray amin'ireo toerana tokony hojerenao.
Ny lalambe 10 dia tsy mifarana ao afovoan-tanàna - Raha toa ianao ka mahavita manadino ny lalambe folo eny an-dalana mankany afovoan-tanànan'i LA, dia azonao atao ny maka ny Alameda St avaratra mankany amin'ny toerana mampifandray azy amin'ny lalambe dimy izay hitondra anao hiverina any ivelan'ny afovoan-tanàna.
Tranom-paty ny Bradbury Building taloha. Talohan'ny novonjen'ny mpanavao ity trano manan-tantara ity tsy ho rava, natao tranom-paty ho an'ny razana miandry ny famantarana ny fanjakana na ny autopsie rehefa avy nesorina teo am-pelatanan'ny polisy.
Tetezana roa mamakivaky ny Reniranon'i LA.
The Ny Los Angeles Downtown News dia mitatitra fa ny tetezana First Street dia nanomboka tamin'ny 1913. Ny tetezana dia natao ho fidirana amin'ny lamasinina entana hanaterana fitaovana any amin'ny trano fanatobiana entana akaikin'ny renirano. Ity tetezana ity dia mbola ampiasaina amin'izao fotoana izao ary mampifandray ny Distrikan'ny Zavakanto mankany Little Tokyo. Notokanana tamin’ny 1926 ny tetezana faharoa, fantatra amin’ny anarana hoe Sixth Street, ary ireo lakandrano romanina fahiny no nanentana ny rafitr’izy io.
Akaiky ny ankamaroan'ny firenena
LAX dia iray amin'ireo seranam-piaramanidina akaiky indrindra amin'ny ankamaroan'ny firenena (tsy anisan'izany i Meksika) eran-tany, ka mahatonga azy ho mora ny mandeha any ivelany amin'ny vidiny mora.
Downtown LA dia manana fiainana alina mahafinaritra.
Downtown LA dia manana ny fiainana alina tsara indrindra ao an-tanàna. Ny karazana trano fisotroana sy klioba dia midika fa misy foana ny zavatra azo isafidianana, na ianao te hanao fety dihy mahafinaritra na toerana mangatsiaka hiarahana amin'ny namana. Ny Downtown LA dia tsara ho an'ny fisotroana isan'andro.
Tsy tsiambaratelo fa ny Downtown LA dia fonenan'ny sasany amin'ireo trano fisakafoanana tsara indrindra ao an-tanàna. Inona no toerana tsara kokoa hisotroana andro? Afaka mankafy labiera vita amin'ny asa tanana na divay eo an-toerana ianao amin'ny sakafo antoandro na brunch ary avy eo dia mivoaka ny cocktail amin'ny alina.